China Zinc Ricinoleate orinasa sy mpamatsy | Springchem
Anaran'ny vokatra:Zinc Ricinoleate
Anaran'ny marika:MOSV ZR
Ny zinc ricinoleate dia ny sira zinc an'ny asidra ricinoleic, asidra matavy lehibe hita ao anaty menaka castor. Ampiasaina amin'ny deodorants maro izy ho toy ny maso mpanala fofona. Tsy mazava ny rafitra an'ity hetsika ity
Bika Aman 'endrika Vovoka tsara, vovoka spaonjy fotsy
Fibobohana toaka mifanaraka
fahadiovana 95%, 99%
Sarobidy PH 6
25kg / kitapo tenona azo zaraina
Mitahiry amin'ny hafanan'ny efitrano mahazatra. Tazomy mafy ny kaontenera.
1) Amin'ny fampiharana kosmetika, ny deodorizing dia midika hoe manala na misoroka fofona tsy mahafinaritra. Ny sira zinc an'ny asidra ricinoleika dia akora deodorizing mandaitra mahomby. Ny fahombiazan'ny zinc ricinoleate dia mifototra amin'ny fanafoanana ny fofona; mamatotra akora mamofona tsy mahafinaritra amin'ny fomba tsy fahitana azy intsony. Azo afangaro miaraka amin'ireo singa misy menaka hafa ao amin'ny dingan'ny solika, indrindra amin'ny 80 ° C / 176 ° F. Alao sary an-tsaina toy ny mahazatra. Ny haavon'ny fampiasana mahazatra dia 1.5-3%. Ho an'ny fampiasana ivelany ihany.
2) Sehatry ny indostria, tehina Deodorant na déodorant karazana emulsion.
3) Ity vokatra ampiasaina amin'ny loko avo lenta ity, indrindra ny loko mora vidy, ny loko antirust dia misy fiatraikany tsara kokoa amin'ny fampiasana an'io vokatra io, ny loko manamarika ny arabe dia hiharihary kokoa raha mampiasa an'io voankazo zinc asidra ricinoleika io; nampidirin'ny 0,5% - 0,5% in ny firakotra.
Teo aloha: (2,5-Dioxo-4-imidazolidinyl) urea / Allantoin
Manaraka: Guar 3150 & 3151
Zinc Ricinoleate Liquid
Zinc Ricinoleate azo antoka
Guar 3150 & 3151